Nyowani Vhezheni yeOracle Linux 7.7 Yakaburitswa neRHEL 7.7 Zvimiro uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Oracle Linux ndeye Red Hat-based GNU / Linux kugovera, Yakaiswa zvakare uye yakaparadzirwa naOracle, inowanikwa pasi peGNU (GPL). Kugoverwa kweLinux kunoshandiswa mune zvigadzirwa kubva kuOracle, iyo kambani yakatora bhizimusi reSun Microsystems
Vhiki Oracle rakazivisa kuvhurwa kweshanduro nyowani yekuparadzira kwako Linux maindasitiri Oracle Linux 7.7, iyo inogadzirwa pahwaro hweRed Hat Enterprise Linux 7.7 package base. Pamusoro peiyo RHEL kernel package (3.10.0-1062).
Iyi vhezheni itsva yeOracle Linux inosanganisira iyo Isinga putsike Enterprise Kernel 5 kernel (4.14.35-1902.3.2), yakaburitswa mwedzi mishoma yapfuura. Zvinyorwa zveKernel, kusanganisira kuputsika muzvimedu zvakasiyana, zvinowanikwa kubva kuOracle Git yeruzhinji.
Iyo Kernel yakamisikidzwa seimwe nzira kune yakajairwa Kernel package inowanikwa muRed Hat Enterprise Linux uye inopa akati wandei maficha epamberi, senge DTrace kusangana uye nekuvandudza Btrfs rutsigiro. Kunze kwekernel, mashandiro eOracle Linux 7.7 akafanana neRHEL 7.7.
1 Oracle Linux 7.7 Makiyi Akakosha
2 Dhawunirodha Oracle Linux 7.7
Oracle Linux 7.7 Makiyi Akakosha
Iyi vhezheni itsva Oracle Linux 7.7, sezvambotaurwa pakutanga yakavakirwa paRHEL 7.7 saka ingangoita shanduko dzese dzakambotaurwa uye zvimwe zvezvinotevera zvakare hunhu hweRHEL 7.7
MuOracle Linux 7.7 NetworkManager inowedzera kugona kumisikidza migwagwa mitemo nekero keron (policy routing) uye rutsigiro rweVLAN kusefa pane network network Bridge.
Zvemidziyo nemifananidzo muUBI fomati (Wese wepasi mufananidzo), se yakawedzera rutsigiro rwekutarisa zvemukati kutevedzera SCAP Kudzivirirwa Gwara.
kunze kwaizvozvo Btrfs rutsigiro rwakadzikiswa muRHEL kernel (Kuti ushandise Btrfs, unofanirwa kushandisa UEK R4 uye UEK R5 cores). MySQL mapakeji ayo anoda kutorwa pasi kubva kune yakasarudzika yum repository abviswa kubva mune iyi nyowani vhezheni.
Nezve iyo graphical simaki, tsananguro dzakawedzerwa kugonesa panguva imwe chete multithreading modhi (SMT) muhurongwa uye kuburitsa yambiro inoenderana.
Uyewo akawedzera DAX kutsigira (kunongedza kwakananga kuFS ichipfuura peji cache pasina kushandisa block kero yedhijitari) mu ext4 uye XFS, pamwe neOverlayFS rutsigiro uye mutyairi akagadziridzwa weNVMe / FC QLogic qla2xxxx.
Yezve system kurongedza, iwo matsva akagadziridzwa mavhezheni eNSS (Network Security Services) mapakeji akajekeswa, scap-chengetedzo-gwara 0.1.43, mumvuri-zvishandiso 4.6, gcc-raibhurari 8.3.1, linuxptp 2.0, tuned 2.11, chrony 3.4 . Python3 mapakeji akawedzerwa pamwe ne Python 3.6 muturikiri.
Zvekuyedza pane iyo UEK R5 kernel, zvekuyedza maficha zvinokurudzirwa:
EL ichikwanisa kupinza kunze kwenyika midziyo muSystemd
Mamwe magadzirirwo ekugadzira block kifaa chengetedzo uye chinhu chengetedzo yePNFS
Iyo HMM (yakasarudzika memory memory manejimendi) sisitimu yekushandisa michina ine yavo yekumusoro manejimendi zvikamu
Cisco VIC InfiniBand Madhiraivha uye ibusnic_ Zvirevo
tsigiro ye SR-IOV (Imwe Midzi I / O Virtualization) mu qlcnic mutyairi
Tsigiro yeTNC (Inovimbwa Netiweki Kubatanidza), rutsigiro rwekuisa / kuburitsa uchishandisa mizere yakawanda (scsi-mq, Multi-teki) muSCSI
plugin yekugadzirisa ekuchengetedza arrays kuburikidza ne libStorageMgmt API.
Dhawunirodha Oracle Linux 7.7
oracle linux inogona kutorwa pasi mahara kubva kuOracle's electronic delivery service (Oracle's E-kuendesa sevhisi), uye inogona kugoverwa zvakasununguka.
Kana iwe uchifarira kugona kudhawunirodha vhezheni itsva yeOracle Linux kuti ukwanise kuyedza pakombuta yako kana muchina chaiwo muchina.
Iwe unongofanirwa kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekiti uye muchikamu chekurodha tichawana chinongedzo chekutora sisitimu, kana kana uchida, ini ndinosiya chinongedzo pano. Iyo yekubatanidza yekugona kumbira kurodha ndeichi.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo kurodha pasina zvirambidzo unofanirwa kuita yemahara kunyoresa pamberi, iyo yaunogona kuzoenderera mberi nayo kuwana zvinotevera kuburitswa.
Iyo 4,7 GB yekuisa iso mufananidzo inogoverwa yeiyo x86_64 uye ARM64 (aarch64) zvivakwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Nyowani vhezheni yeOracle Linux 7.7 yakaburitswa neRHEL 7.7 maficha uye nezvimwe
Semazuva ese mune aya kesi, kumbundira kukuru kumhuri neshamwari. Ndinovimba Oracle ichapora kubva mukutapwa uye inogona kurarama hupenyu hwakajairika.
Dai raive rakanzi "Kukandwa", ungadai wakanyunyuta here kuti rakanga risiri kubatwa muruoko rwako semunhu ane hunhu hwakanaka?